Garoonka Diyaaradaha Cadan ee Dalka Yeman oo dib u bilaabay howlhiisi – Xeernews24
Wasiirka Isgaarsiinta Xukuumadda Yeman, Muraad Al-Xaalimi, ayaa shaaca ka qaday in maalinta Talaadada ah ee soo socota uu Garoonka Caalamiga ah ee Cadan uu Howlihiisii duulimaadka Diyaaradaha dib u bilaabi doono.
Wasiirka, oo ka hadlayay shir Jara’id uu u qabtay Waakaaladda Wararka Cadan ee (Sabba) wuxuu intaa raaciyay in laga bilaabo Talaadada soo socota Dadka Musaafuriinta uu u furan yahay Garoonka Cadan, si rasmi ahna loo bilaabi doono duulimaayadii caadiga ahaa ee Diyaaradaha Rakaabka isaga kala goosha wadamada Caalamka.
Muraad Al-Xaalimi, wuxuu cadeeyay in maalintaasi howlwadeenada Garoonka Cadan,ay qaabili doonaan Duulimaadkii ugu horeeyay ee Diyaarad ka imanaysa Magaalada Qaahira ee Xarunta dalka Masar.
Wasiirka Isgaarsiinta Yeman, wuxuu kaloo sheegay inay Wasaaradiisu juhdi badan gelisay dib u furidda Garoonka Caalamiga ah ee Yeman, ayna u dhameystirtay, dhanka qalabka isgaarsiinta iyo dhamaanba adeegyadii loogu baahnaa Garoonka iyo Duulimaadka Diyaaradaha taas oo dalka yeman oo dagaal sokeeyey 4 sanno ee la soo dhaafay u dib uga soo kaban doono.
xooga Milatari ee qaaradda Afrika oo Djibouti meel ka soo galin halka Koonfurta... Xassuq an loo meel dayin oo ka dhacay dalka jabaa